RASMI: Kooxda Barcelona oo ku dhawaaqday bixitaanka Lionel Messi – Gool FM
(Barcelona) 05 Agoosto 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa war rasmi ah ay soo saartay caawa waxay ku shaacisay bixitaanka Lionel Messi, waxayna uga mahadcelisay wax walba oo uu sameeyay sanadihii la soo dhaafay.
Barcelona ayaa si rasmi ah u shaacisay in kabtankeeda Lionel Messi uusan heshiiska u cusbooneysiin doonin kooxda, isla markaana uusan sii joogi doonin naadiga reer Catalonia, kaddib markii uu dhamaaday qandaraaskiisa bishii June ee la soo dhaafay.
Website-ka Blaugrana ayaa lagu daabacay warka rasmiga ah ee ka soo baxay kooxda, wuxuuna u dhignaa sidan:
“In kasta oo Barcelona iyo Lionel Messi ay gaareen heshiis iyo ujeedo cad ee labada dhinac ah, si uu maanta u saxiixo heshiis cusub, haddana tani ma dhici karto sababo la xiriira caqabado maaliyadeed.”
“Xaaladdan darteed, Messi kuma sii nagaan doono Barcelona, labada dhinacba waxay si aad ah uga xun yihiin in rabitaanka ciyaaryahanka iyo kooxda aan la fulin doonin ugu dambeyntii.”
Warkan rasmiga ah ee ka soo baxay maamulka kooxda Barcelona ayaa waxaa lagu soo gaba-gabeeyay:
“Barcelona waxay si weyn ugu mahadcelineysaa ciyaaryahanka wax qabadkiisa kooxda, waxayna u rajaynaysaa mustaqbal wanaagsan noloshiisa gaarka ah iyo tan xirfadeedba.”